Ndị na -emepụta ST Zirconia Block - China ST Zirconia Block Factory & Suppliers
Yucera eze ST zirconia ngọngọ maka sistemụ cad / cam / zirconium eze maka ụlọ nyocha CAD
Cad Cam ST Zirconia Block 98mm Yucera Dental Lab Material na akụrụngwa akụrụngwa
1. Mmekọrịta dị mma. Ọ naghị enwe mgbakasị ahụ, ọ nweghị mmeghachi ahụ nfụkasị nke chịngọm ahụ, ọ nweghịkwa akara ojii nke chịngọm ahụ. Ọ dabara nke ọma maka oghere ọnụ ma na -ezere ihe nfụkasị ahụ, mgbakasị ahụ, corrosion na mkpali ndị ọzọ na -adịghị mma nke ezé poselin ọla edo ọdịnala dị n'ime oghere ọnụ.
2. Ahụ eze nwere nnukwu ike na ekweghị ekwe. Nguzogide pụrụ iche nke mgbawa na ihe na -agwọ ọrịa siri ike mgbe mgbawa na -eme ka ezé sie ike.
YUCERA Akụrụ Ezé Ụgha Maka ụlọ nyocha ụlọ nyocha CAD CAM Dental Super Translucent Zirconia Block.
Zirconia translucent kacha mma ma ọ bụ prettau bụ maka okpueze contour zuru oke na àkwà mmiri
High translucent maka nkịtị ịnagide na akwa
Ultra translucent maka ihu